काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना महामारी भयावह बन्ने खतरालगत्तै उच्च सतर्कता, लकडाउन हुनसक्ने « रिपोर्टर्स नेपाल
पछिल्लो पटक उपत्यकामा दिनहुँदा दर्जनौं संक्रमित थपिन थालेका छन् । मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ ।
उपत्यकामा कोरोना महामारी भयावह हुनसक्ने विज्ञहरुको चेतावनी छ । हिजो रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुन्दरमणि दिक्षित, सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. बाबुराम महासिनी र डा.अनुप बास्तोलाले भयावह हुनसक्ने खतरा औल्याएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि सम्भावित खतराबारे उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकार आवश्यक तयारीका साथ शतर्क रहेको जानकारी गराएका छन् ।